Kaamero badda ku luntay oo laba sano ka dib la helay - BBC News Somali
Kaamero badda ku luntay oo laba sano ka dib la helay
Lahaanshaha sawirka PARK LEE
Image caption Laba sano ka dib sidan ayey u ekaatay kaamerada
Kaameradan ayaa waxaa soo helay arday iskuulley ah iyo macalinkooda, kuwaas oo go'aansaday in ay ku baahiyaan baraha bulshada si ay u helaan mulkiilaha kamirada, iyagoo ay u suurta gashay in ay ku helaan maalin gudaheed.
Mulkiilaha Kamirada Serina Tsubakihara, ayaa BBC u sheegtay in ay aamini weyday arrintaasi oo ay yaab ku noqotay markii ay saaxibadeed u sheegeen lana wadaageen fariimo watay sawiro ku jiray kamirada luntay.
Gabadhan oo wax ka barata mid ka mid ah jamacadaha dalka Japan ayaa xilligii ay ka luntay kamirada waxay ku jirtay fasax ay ku joogtay jasiiradda Ishigaki Okinawa, oo 250KM bariga ka xigta Taiwan.
Waxay ahayd Sebtembar 2015-tii markii ay kaamerada uga dhacday badda iyadoo u maleynaysay in aysan heli doonin waligeed.
Image caption Qafiskan ayaa la aaminsan yahay inuu kaamerada badbaadiyey
Balse qaar ka mid ah sawirrada ayaa waxa ku jiray kuwo lagu qaaday gudaha dalka Japan, waxayna u maleeyeen in mulkiilaha uu u dhashay Japan, ka dib ayey farriimahooda waxay ku qoreen luqadaha Shiinaha iyo Japan. Waxaa si lama filaan ah fariintaas looga baahiyey baraha bulshada 10 kun oo mar maalin gudaheed .
Ms Tsubakihara ayaa sheegtay in ay aad u faraxday, ayna nasiib badan tahay in fursadaan la yaabka leh ay dareensiisay naxariista dadka ay leeyihiin, iyadoo sheegay in ay sawiradaan xusuusinayaan waayo-waayo. Waxay sidoo kale BBC u sheegtay in ay qorshaysanayso in ay ku laabato Taiwan bisha Juun, si ay ugu mahadceliso ardaydii iyo macalinkoodii soo helay kaamerada badda uga dhex luntay.